ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခတွေ ဖြေရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက အထူးကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက် ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျကာတာပို့စ် သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား ဒုတိယ သမ္မတဟောင်းလည်းဖြစ် PMI ခေါ် အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ လည်းဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ Jusuf Kalla ကို အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ယူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ရာမှာ မစ္စတာ Kalla က သဘောတူ လက်ခံခဲ့ကြောင်း သမ္မတ ယိုဒိုယိုနိုက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မစ္စတာ Kalla ဟာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ အလားတူ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာကြောင့် ဒီတာဝန်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မကြာခင်ကလည်း မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်ပြီး ပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ကြောင်းလည်း သမ္မတ ယိုဒိုယိုနိုက ပြောပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဟာ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အတူ မစ္စတာ Kalla ဦးဆောင်တဲ့ PMI အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီအသင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကူညီရေးပစ္စည်းတွေ ပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ Kalla ဟာ ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ Kalla ဟာ လာမယ့် စက်တင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ထပ်မံသွားရောက်ပြီး ဒေသခံ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရကြောင်း သမ္မတ ယိုဒိုယိုနိုက ပြောပါတယ်။
ဒီအတွင်း အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း လက်ရှိ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပူးတွဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူသားချင်း စာနာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို မြန်မာအစိုးရက တောင်းခံလာမယ်ဆိုရင် မိမိတို့အနေနဲ့ ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရက မိမိ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာကို ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
When you are oppressed by military junta, you welcomed the outside intervention. Now you are oppressing the others and you said the same thing what the junta said before. Be Careful, you must reap what you saw!
Aug 29, 2012 11:39 PM
We feel that it is interfering our country-sovereignty , so we totally oppose that appointment. Our government should also not accept that by showing pay-respect to people-desire. Our government should not make decision on this affair and it must be decision of myanmar people. Aug 28, 2012 10:42 PM
if the burma goverment solve the voilance in time with the fair way
no muslim country will　interfere now they killed innocent people
Aug 18, 2012 05:19 PM
I don't think any foreigner to solve our country's internal affairs. In this Rakhine crisis, we have to defend our soil which should not be invaded by any other outsiders.
Aug 18, 2012 08:33 AM
all burmese ! you should understand that they are trying to do islamization .we no need to care IOC . Aug 18, 2012 03:10 AM